गायक राजेश पायल राईको घरमा आगलागी,सबै नष्ट ! - NEPALI TV AUSTRALIA
गायक राजेश पायल राईको घरमा आगलागी,सबै नष्ट !
NTV NPL Tuesday, September 17, 2019
काठमाण्डौ – गायक राजेश पायल राईको घरमा आगलागी भएको छ । बानेश्वरमा रहेको उनको घरमा सोमबार साँझ आगलागी भएको हो । आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण भने आइनसकेको प्रहरीले जनाएको छ । गायक राई साङ्गीतिक कार्यक्रमका लागि यतिबेला नेपाल बाहिर रहेका छन् । आगलागी बाट उनले पाएका अवार्ड र सम्मानहरु समेत जलेर नष्ट भएका छन् । घरमा आगलागी पछि उनले लेखेका छन् :
‘म पीडामा छैन किनकी तपाइँहरुको आशिर्वाद र मायाको अगाडि यो पीडा, पीडा हैन । मेरो छिमेकीहरुले दर्शाउनु भएको सहयोग, नेपाल प्रहरी, दमकल परिवारप्रति यहाँबाटै हार्दिक नमन । अवार्ड जले होलान् तर तपाइँहरुले दिएको आशिर्वाद माया, सुझाव नजलोस् । म सदा तपाइँहरुकै काखमा लुट्पुटिने मान्छे ।’
हाँस्य टेलिश्रृंखला ‘सक्किगोनी’ विरुद्ध प्रहरीमा कपिराइटको उजुरी
सम्बन्ध बिच्छेद गर्दै पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गी
अमेरिकामा अवार्ड दिन्छु भन्दै माेडलसँग सेक्स अफर
छवि सँगै बस्न थालिन् शिल्पा
रुचाईएन नयाँ ‘भद्रगोल’
तीज उत्सवमा झुमे सिड्नीका दिदिबहिनि
उच्च अदालतले पनि दियो नायिका शिल्पालाई पक्राउ गर्न आदेश
गायक रामकृष्ण ढकाल आर्थिक संकटमा, पाँच करोड ऋण नतिरेको भन्दै सहकारीले निकाल्यो सूचना
दुईजिब्रे अभिनेत्री केकी अधिकारी,यसरी भयो छताछुल्ल